यी जिल्लामा अहिलेकै क्रममा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पुन: लकडाउन हुने! – PathivaraOnline
Home > समाचार > यी जिल्लामा अहिलेकै क्रममा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पुन: लकडाउन हुने!
admin September 24, 2020 September 24, 2020 समाचार	0
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघे फेरी लकडाउन गर्ने संकेत गरेको छ । अहिले देशभर कोरोना संक्रमितको दर बढ्दै गएको अवस्थामा मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो । बढ्दै गएको कोरोना संक्रमितको संख्या र जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आईसीएस) ले २५ हजारमाथि संक्रिय संक्रमित भएमा लकडाउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस***
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा।डा। जागेश्वर गौतमले बुधवार नियमित पत्रकार व्रिफिगंका क्रममा यस्तो बताएका हुन् । उनले २५ हजारमाथि संक्रिय संक्रमित हुँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायले व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले लकडाउनको लागि सिफारिस गर्ने बताएका छन् । कोरोना संक्रमितको दर बढ्दै गएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएका विभिन्न क्षेत्र अझै एक महिनासम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
चैत ११ गतेदेखि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउन साउन १ गतेसम्म भएको थियो। त्यसपछि जोरबिजोर प्रणालीमा केही खुकुलो बनाएपछि कोरोना संक्रमित थपिने क्रम बढ्दै गएको छ । कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले काठमाडौ लगायत केही जिल्लामा निषेधाज्ञा समेत लागू गरेको थियो । काठमाडौमा लकडाउन हटाएपछि पनि एक महिना निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । तर पनि कोरोना संक्रमितको संख्या भने बढ्दै गएको छ ।
लामो समय निषेधाज्ञा लगाउँदा सर्वसाधारणवाट विरोध आएपछि सरकारले जनजीवनलाई सहज बनाउने भन्दै अहिले अधिकांश क्षेत्र खुला गरेको छ। निषेधाज्ञाको अन्त्य भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले २५ हजार बढी सक्रिय संक्रमित भएमा लकडाउनको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए।
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा ११ सय ७२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार योसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ६७ हजार ८०७ पुगेको छ। त्यसैगरी २४ घण्टामा १८ सय ९३ जनाले कोरोना जितेका छन्। योसँगै नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या ४९ हजार ९५४ पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो डिस्चार्ज हुनेको ७३ दशमलव ७ प्रतिशत हो।
सँगै बुधबार सात जनाको कोरोनाले निधन भएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोनाले निधन हुनेको संख्या ४३६ पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले मोरङ, सिरहा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन र रुपन्देहीमा पाँच सय बढी संक्रमित रहेका छन् । यी जिल्लामा अहिलेकै क्रममा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पुन लकडाउन लागू गर्ने सम्भावना बढेको छ ।
बैशाखमा सबैभन्दा खतरा : यस्तोसम्म हुने ज्योतिषी शिवराजको भविष्यवाणी, होसियार रहन आग्रह (भिडियो)